:Bọchị: Jenụwarị 14, 2020
Onye isi obodo Obodo isi obodo Istanbul Ekrem İmamoğlu kwupụtara na ha enweghị ike ịmalite n'ihi na ha enwetaghị ihu ọma nke Treasury n'agbanyeghị na ha hụrụ otuto; A mụrụ Eminönü-Alibeyköy Tram Line, Bostancı-Dudullu Metro Line na Yenidoğan-Hospital Line. na President [More ...]
Erciyes Winter njem Turkey flagship ngwụsị izu nke 53 puku ndị ọbịa si 90 anāchi achi gburugburu Turkey si ọbịa. Onu kachasi ndi nleta Erciyes si n’azu obodo bu site na Istanbul, Ankara, Antalya na Adana. [More ...]
E nyere ụlọ ọdụ ọdụ ụgbọ elu Istanbul Sabiha Gokcen International Airport ụlọ ọrụ LEED nke US Green Building Council (USGBC) nyere. Airportgbọ elu Sabiha Gokcen [More ...]
Ọzụzụ Ak anday na Ntụrụndụ Akụrụngwa nke Nrụrụ Ihe Nrụrụ nke B n'ihi nke nro ahụ, Akçay nwere oke mmachi nke 2019 TL nwere oke GCC nke TL 683970 yana ọnụ ahịa TL 764.588,49 nke Statelọ Ọrụ ilgbọ okporo Anụmanụ nke Turkey (TCDD). [More ...]
Tozọ Mee Ka Nlele Nlele nke Instagram
Instagram, otu n'ime nyiwe mmekọrịta ọha na eze kachasị n'ụwa, bụ sọftụ nke ikiri foto, mana na-enyekwa ohere maka nkekọrịta vidiyo site na ịgbakwunye mmelite dị iche iche n'oge oge. Ihe ohuru nke Instagram [More ...]
22 Ewu nke Slope na Hectometer Plate na DBM Mpaghara N'ihi nro, mmachi ọnụahịa nke GCC yana oke mmachi nke TL 2 maka Servicelọ Ọrụ Purzụta Mpaghara nke abụọ nke oflọ Ọrụ Ọchịchị Turkish State (TCDD) 2019/715578 [More ...]
Arifiye Pamukova Km: 167 + 235 Mpụ na Km: 159 + 680 1gabiga Bridge Construction Work Tender Result The iyakar uru nke Turkish State Railways 2019st Regional Directorate of Materials (TCDD) 675104/XNUMX [More ...]
Otu United Nations Workers Union (BTS) ụnyaahụ, ikpe mbụ nke ihe mberede ụgbọ oloko na-ekpughere ezigbo ibu ọrụ maka mgba iji kpughee ihe kwuru. Nkwupụta ederede nke BTS kwuru dị ka ndị a; “Ankara - Konya [More ...]
Mayor İmamoğlu: 'Akwụ ụgwọ nke Channel Ajụjụ Mark'
Onye isi obodo Obodo isi obodo Istanbul Ekrem Imamoglu, Sultanbeyli'ye 20 mere nleta na mpaghara obodo. Imamoglu, ndị ntaakụkọ zara ajụjụ n’oge nyocha nke ubi ya na Sultanbeyli. Kanal Maka Kanal İstanbul, onye kwurịtara banyere ego ya, Maazị Minister,. [More ...]
Imamoglu na-akpọ Erdogan maka ọdụ ụgbọ oloko Basaksehir
Onye isi obodo Obodo isi obodo Istanbul Ekrem Imamoglu, Sultanbeyli'ye 20 mere nleta na mpaghara obodo. Imamoglu, ndị ntaakụkọ zara ajụjụ n’oge nyocha nke ubi ya na Sultanbeyli. A ga-ejikọ eriri igwe ahụ na şlọ Ọgwụ Başakşehir site na İmamoğlu [More ...]
A ga-eme ntuli aka maka Istanbul?
Ka otu ndị na-eme ọrụ na AKP chọrọ ntuli aka maka Kanal Istanbul, emere mkpebi ikpeazụ. Ndị otu ahụ agaghị aga eme ntuli aka. Otu na AKP na Onye isi obodo Metropolitan Munrem Ekrem İmamoğlu [More ...]
SAMULAŞ Nleba Ọganiihu Ọhụụ Na-aga n'ihu
SAMULAŞ N'ọgbọ Ha Na-eme Ọdịmma Na-aga n'ihu Na-aga n'ihu: SAMULAŞ N'ime usoro “Ọgbọ Ndị Ha Na-enwe Ọdịmma”, iwu ndị a ga-agbaso maka nchekwa nke ụgbọ ala ọha na njem ụgbọ njem ọha na obodo na gburugburu ebe obibi. [More ...]
Okporo polzọ Ogbara Obodo Ordu
Site n'ọrụ okporo ụzọ nke Ọchịchị Obodo Ordu rụrụ n'ime ọnwa itoolu ndị ọzọ, enyere ụmụ amaala njem njem ọgbara ọhụrụ. Na mgbakwunye na asphalt dị ọkụ, njigide, arụ ọrụ okporo ụzọ, oghere imeghe ụzọ na [More ...]
Gịnị bụ sistemụ Silway SIL?
Usoro ntinye akara bu sistemụ na-enye ihe nchekwa nchekwa adịghị mma nke dị mkpa maka sistemụ ụgbọ ala dịka Tram (SIL2-3), Light Metro na Metro (SIL4) site na ị na-arụ usoro ndị metụtara ya n'oge kacha mma. a [More ...]